အသက်များစွာကိုကယ်တင်ပေးနေတဲ့ သမီးဆရာဝန်မကြီးအတွက် အမြဲဂုဏ်ယူနေရပြီး သမီးရဲ့အိမ်ထောင်ရေးသာယာဖို့ဆုပေးလိုက်တဲ့ ကျော်သူတို့ဇနီးမောင်နှံ - Myanmarload
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နေ့ က 10:26 November 21, 2020
Photo Credit-Myint Myint Khin Phe's FB Acc
ကျော်သူက သူချစ်ရတဲ့ဇနီးချောလေး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်နဲ့ အေးချမ်းစွာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့တော့ အမြဲတမ်းဖုန်းပြောလေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း ကျော်သူနဲ့ ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့ဇနီးမောင်နှံက သူတို့ချစ်ရတဲ့သမီးလေးအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေ တောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ကျော်သူက "Happy Birthday!!! သမီး မြင့်မိုရ်ဦးလူသားများ၏ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ကာ အသက်များစွာကို ကယ်တင်နိုင်သည့် သူတော်ကောင်းဆရာ၀န်မကြီးဖြစ်ပြီး မိသားစုနှင့် ရိုးမြေကျသည်အထိ ချစ်ခင်စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပေါင်းသင်းနေထိုင်သွားနိုင်ပါစေ။ ဖေဖေကျော်သူ+မေမေရွှေဇီးကွက်" ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မေမေရွှေဇီးကွက်ကတော့ "Happy Birthday သမီးလေး Dimple Myint Mo Oo& Happy Anniversary Dicky Zin & Dimple. ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေအားလုံးတစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်စုံပါစေ။ဝိပဿနာဘာဝနာကို လွယ်ကူစွာကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ပြီး ဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို ရရှိနိုင်ပါစေ။ ချစ်တဲ့ဖေဖေကျော်သူနဲ့ မေမေရွှေဇီးကွက်" ဆိုပြီးပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ကျော်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့သမီးချောလေး Dimple တို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Source & Photo Credit-Kyaw Thu's FB Acc & Myint Myint Khin Phe's FB Acc